नेपाली साहित्यको विश्वव्यापीकरणका लागि प्रज्ञा अगाडि बढ्नु पर्छ - Rojgar Manch
सोमवार, ५ अशोज, २०७७
नेपाली साहित्यको विश्वव्यापीकरणका लागि प्रज्ञा अगाडि बढ्नु पर्छ
सुभद्रा भट्टराई, प्राज्ञ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
आइतवार, ६ माघ, २०७५
नेपाली काव्य विधामा निरन्तर सकृय स्रष्टा हुनुहुन्छ– सुभद्रा भट्टराई । उहाँका फुटकर कविता, वैचारिक आलेख एवम् चिन्तनपरक रचनाहरु प्रकाशित छन् । स्मृतिका डोबहरु उहाँको हालै प्रकाशित कविता कृति हो । अध्ययन, अध्यापन र भ्रमणमा विशेष अभिरुचि छ स्रष्टा भट्टराईको । भानु प्रतिष्ठान, प्रश्रित प्रतिष्ठान लगायत अनेक साहित्यिक संस्थामा उहाँ आबद्ध हुनु हुन्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हालै प्रज्ञा सभामा मनोनित साहित्यकार भट्टराई सुदुर पूर्वको सिमानाको शहर काकडभित्ता निवासी हुनुहुन्छ । बुबा शुकदेव भट्टराई तथा आमा दुर्गादेवी भट्टराईको सुपुत्री नेपाल साहित्यमा सकृय र प्रतिबद्ध रहिआउनु भएको छ । प्राज्ञ भट्टराईसँग गरिएको वार्ताको संक्षिप्त रुप–
सरल वैचारिक दृष्टिकोणले पूर्ण अभिव्यक्तिले सजिएको सुन्दर र स्वरमय काव्यात्मक मनोवेगको स्वच्छन्द प्रवाह नै कविता हो । जसले प्रकृति, जीवन र जगत्को प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
किन लेख्नु हुन्छ कविता ?
कविता लेखन मेरो रुचि मात्र होइन, नियमित प्रवाह सहितको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । जीवनका भोगाइहरुलाई शान्तिमय बनाउन विचार प्रवाह र सन्देश प्रवाहको माध्यमबाट सामाजिक चेतना अभिवृद्धिमा केही आयाम पुगोस् भन्ने ध्येयले म कविता लेख्छु ।
साहित्यले समाजमा परिवर्तन ल्याउँछ ?
अवश्य नै ल्याउँछ, साहित्य समाजको दर्पण हो । साहित्य सृष्टि हो । साहित्य अन्तर्गत रहेर सारा वाङ्मयको सृजना गर्न सकिन्छ । जसले ज्ञान प्रदान गर्नुको अतिरिक्त समाजलाई सुसंस्कृत, व्यवस्थित र मर्यादित गराउने भएकोले सामाजिक परिवर्तनमा श्रृङ्गार प्रदान गर्दछ भन्ने लाग्दछ ।
कुन विधा बढी मनपर्छ ?
साहित्यका सबै विधा मनपर्छ । विशेष गरी कविता विधाको विद्यार्थी भएको हुँदा कवितासँग अलि बढी प्रेम छ । आख्यान, नियात्रा र सामाजिक दर्शन मेरो मनपर्ने विधा हो ।
तपाईंको लेखनले दिने सन्देश के हो ?
मेरो विचारमा सम्पूर्ण सन्देशले दिने विचार भनेको सामाजिक रुपान्तरण, चेतना, आनन्द र परिवर्तन नै मेरो सवालमा भन्नुपर्दा नारी जागरण, मानवताको प्रेम, प्रकृतिको पूजा र सन्देश हो जस्तो लाग्छ ।
कुन समयमा लेख्नु हुन्छ ?
मेरो लेख्ने निश्चित समय छैन । मनमा भाव तरङ्ग, साहित्यिक चेतना जागृत भएको कुनै समय मेरो लेखनहरु भएका छन् । अनायास नै म लेख्न बसेकी हुन्छु । यति बेला, यो स्थान भन्ने छैन । परिवेशले नै मलाई लेख्ने उत्प्रेरणा दिन्छ जस्तो लाग्छ । हुन त यो मेरो सवालमा मात्र हो ।
नयाँ कृति के आउँदैछ ?
विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समसामयिक लेख, रचनाहरुको सँगालो प्रकाशित गर्ने जमर्कोमा छु । छिट्टै मेरो दोस्रो कविता कृति ल्याउने तयारी गरिरहेकी छु ।
पूर्वमा तपाईंको सकृयता निकै छ । समाजसेवा, व्यवसाय, साहित्यमा कार्यरत हुनुहुन्छ । कसरी समय दिनु हुन्छ ?
सकृयता भन्नुभन्दा पनि मेरो भूमिका र दायित्व हो जस्तो लाग्छ । सामाजिक, साहित्यिक, व्यवसायिक र आफ्नो शिक्षण पेशाको विविध जिम्मेवारीहरु छन् । मैले यसलाई सिक्ने र आपूm परिस्कृत हुने अवसरका रुपमा लिएकी छु । समय व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने भएकाले समयलाई व्यवस्थित गरेर कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई पालना गरिरहेकी छु जस्तो लाग्छ ।
अनेक संघ, संस्थामा जोडिनु भएको छ । साहित्यमा यी संस्थाले के कस्तो सघाएका छन् ?
मलाई विभिन्न संस्थाहरुले सिकाएका र संघसंस्थामा रहनुहुने अग्रज व्यक्तित्व, समकालीन साथीहरु, आफ्ना अनुजहरु तथा भाइबहिनीहरुको ऊर्जाले नै मलाई बहुपक्षीय सहयोग पु¥याइरहेका छन् । यो मेरो सम्पत्ति ठानेकी छु । त्यसैले मैले सिक्ने ठाउँहरुलाई एउटा पाठशालाको रुपमा लिएकी छु ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मनोनित हुँदा कस्तो लाग्यो ?
म जस्तो साहित्यको सामान्य विद्यार्थीलाई सरस्वतीको मन्दिरको प्रतीक, साहित्यको तीर्थस्थल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मनोनयनले मलाई प्रशस्त सिक्ने अवसर प्राप्त गरेको अनुभूति भएको छ । जुन मेरा लागि गौरव ठानेकी छु ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आगामी लक्ष्य कस्तो हुनु पर्छ ?
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सबै भाषाभाषी, जातजाति र समग्र मुलुकको साहित्यलाई उन्नयन गर्ने र गराउने संस्था भएको हुँदा बहुभाषी, बहु साँस्कृतिक पहिचानलाई उच्च बनाउन गहन र बृहत्तर अध्ययन अनुसन्धान गरी सबैको साझा साहित्यिक थलो बन्न सक्नु पर्दछ जस्तो लाग्छ । नेपाली साहित्यको विश्वव्यापीकरणका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ठोस योजनाको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विना आग्रह, पूर्वाग्रह अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नगरी नहुने काम के के छन् ?
हुन त यस प्रतिष्ठानको नियम ऐनले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ हेर्न र अध्ययन गर्न बाँकी छ । तर पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आगामी दिनमा सात वटा प्रदेश अर्थात् प्रान्तीय राज्यहरुमा प्रतिष्ठानको गठन गर्नु पर्छ । साथै विभिन्न भाषामा लेखिएका साहित्यका विधाहरुलाई समष्टिगत गरी अनुवाद सहित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउनु पर्छ । नयाँ पुस्ताका लेखक, सम्पर्क स्रष्टाहरुलाई उत्प्रेरणासहित कला, साहित्य र साँस्कृतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने एउटा मार्ग प्रशस्त गराउने कुरामा मेरो अहम् भूमिका रहनेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
साहित्य-वार्ता : साहित्यको बिस्तारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सहकार्य गर्नुपर्छ
साहित्य-वार्ता : ‘नेपाली भाषाको आफ्नै स्थान छ’
साहित्य-वार्ता : ‘अनेसासलाई म जापानी शैलीमा ढाल्दैछु’
साहित्य/अनुभूति : समय र स्वयंको कलिलो कमाण्डर
अमेरिका फर्कीएका आङ्दावालाई छैन आनन्द
‘अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्न सम्भव छैन, हाम्रो माग पुरा नभए साउन ८ मा चाबी बुझाउँदैछौ’
‘मेनपावरको इजाजत नविकरण गराएरै छाड्छौ, यो हाम्रो अधिकार हो’-सुजित श्रेष्ठ
साहित्यवार्ता : ‘नेपाली साहित्य विश्वस्तरमा पुग्ने कुरा असम्भव होइन’- गोपाल पौडेल
बाहिरका नेपालीले आफ्नो छातीमा देश नेपाल टाँसेर बाँचेका छन् : महेश्वर शर्मा, कवि /लेखक
‘ट्याक्सी चलाउदै समाजसेवा गर्दै’
कीर्तिमानी आरोही ‘हिम चितुवा’ आङरिता शेर्पाको निधन
विख्यात हिमआरोही आङरिता शेर्पाको निधन भएको छ। ‘हिम चितुवा’ उपनामले चर्चित आङरिताको ७२ वर्षको उमेरमा सोमबार बिहान १० बजे जोरपाटीस्थित […]
२६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै एनआरएनए दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनको समापन (घोषणापत्र सहित)
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन आइतबार सम्पन्न भएको छ । शुक्रबारदेखि आयोजना गरिएको उक्त […]
पोखरीमा डुबेर मोरङमा तीनजनाको मृत्यु
मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका–४ मा पोखरीमा डुबेर एक परिवारका तीन जनाको मृत्य भएको छ । प्रहरीका अनुसार आमासहित दुई छोरीको मृत्यु […]
छ महिनादेखि ठप्प आन्तरिक हवाई उडान आजदेखि सुरु
कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि देशभर लागू गरिएको बन्दाबन्दीको छ महिनापछि आन्तरिक उडान सुरु भएको छ । बन्दाबन्दी शुरु भएको गत […]
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन एजेन्डा नेकपा सचिवालयमा प्रवेश, प्रम ओलीले दिए ३ विकल्प
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयमा पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको एजेन्डा प्रवेश गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा […]